Politika: Vonona ny handray vehivavy ho filoha ve ny malagasy? | mandimby maharo
Politika: Vonona ny handray vehivavy ho filoha ve ny malagasy?
Lalao Ravalomanana no hatolotry ny ankolafy misy azy ho kandida filoham-pirenena. Io no nivoaka taorian’ny fivorianireo lohan-dohan’ny mpisorona ao amin’izany ankolafy izany tatsy Afrika Atsimo ny faran’ny herinandro teo. izy izany no vehivahy fahatelo fatatra fa vonona ny hirotsaka amin’izany fifidianana izay ho mpitarika an’i Madagasikara. Tsiahivina fa efa ela ny tao amin’ny antoko Maitso no nanolotra an’i Sarah Rabearisoa, ary vao tamin’ny volana martsa ny Ampela Manao Politika no nilaza fa Brigitte RAsamoelina no ho atolotr’izy ireo ho kandida.
Raha tsy ho asina resaka ny mbola olana ara-politika izay mifamahofaho amin’izao fanolorana ny vadin’ny filoha teo aloha ho eo amin’izany toerana efa nosahanin’ny vadiny izany dia tsy azo hodia-tsy hita koa ny olana eo amin’ny fiarahamonina sy toetsaina izay tsy maintsy ho sedrain’ireo vehivavy ireo. Mbola raiki-tapisaka ao amin’ny andavanandron-piainan’ny malagasy manko ny hoe ny vehivavy dia “fanaka malemy, kofehy mpanara-panjaitra,…” Any amin’ny faritra maro eto Madagasikara dia tsy fomba ny manome fitenenana ny vehivavy eny imasom-bahoaka, ary na ao an-tokatranony aza dia tsy tokony hialoha ny lahy mihintsy ny vavy eo amin’izay rehetra atao (fisakafona, fandrona, …)
Tsy ho mora amin’ireto vehivavy sahy hisedra ny fitsaran’ny vahoaka malagasy ireto noho ireo antony ireo ny hamaky lay hanova izany fomba izany. Raha ny any ivelany nefa dia hita fa efa lasa lavitra io fampitovizana lenta ny vavy sy ny lahy eo amin’ny fitatanan-draharaham-panjakana io. Raha aty Afrika dia i Ellen Johnson Sirleaf</b>, filohan’ny Liberia no vehivavy lany tamin’ny fomba demokratika voalahany, dia maro ireo vehivavy mitana izany toerana izany manerana izao tontolo izao. Tsy voatery ho filoha koa nefa izy ireny fa maro koa ireo mpitarika politika manova ny fomba fanaovana politika any amin’ny fireneny. Singanina amin’ireny ohatra i Aung San Suu Kyi any Birmania izay nahavita namaha am-pilaminana ny gejan’ny jadon’ny miaramila nitondra io fireneny io ka mampisokatra tsikelikely ny fahalalahana any.
Rivo-baovao no entin’ireto vehivavy ireto amin’ny fomba fijery ny fanaovana politika eto Madagasikara. Azo lazaina fa manana fasahina ny hanova ny fiaraha monina mihitsy izy ireo amin’izao fasahiny hisedra ny fomba sy fahazarana, na tsy fahazarana eo amin’ny fiainam-pirenena malagasy izao. Hatrizay dia tsy nihoatra ny 20% amin’ireo andraikitra ambony eo amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana eto Madagasikara no tazomin’ny vehivavy.. Ny fanontanina mipetraka dia ny hoe ny malagasy, mpifidy ve efa vonona handray vehivavy ho mpitarika ny firenena? Ary indrindra, ireo mpanao politika ve efa vonona ny handray vehivavy ho isan’ny mpitantana mahay?